Andro: 29 Oktobra 2019
96 ny repoblika nataontsika. Tratry ny Taom-baovao
96 an'ny repoblika nataontsika. Mankalaza ny maherifontsika rehetra izahay amin'ny famindram-po sy fankasitrahana, indrindra i Gazi Mustafa Kemal Atatürk, izay nitondra anay tany amin'ny toby farany teny an-dalana mankany amin'ny fahaleovantena.
Tapaka ny Bus Intercity Altınordu Natao tamin'ny zato 80
Endrika fitateram-baravarana Altınordu, izay naorin'ny Kaominin'i Metropolitan Ordu eo amoron'ny làlan-kazatra ao amin'ny distrikan'i Altınordu, dia tsy mitsahatra tsy tapaka. Zava-mahadomelina LOHATENY MBOLA INDRINDRA INDRINDRA 3 arivo 177 [More ...]
Hiaro ny zon'ny olom-pirenena hijanona ao ambadiky ny Elevator mahery
Kocaeli Metropolitan Munisipaly dia nanao fanazaran-tena famonjena ho an'ireo mpiasa ao aminy manoloana ny tsy fahombiazan'ny fiakarana ao amin'ny andrim-panjakana sy ny fikambanana. Olom-pirenena hijanona amin'ny haavon'ny avotra noho ny antony samihafa, indrindra ny fahatapahan'ny herinaratra [More ...]
Vita ny fanamboarana fanamboarana sy fanamboarana haingam-pandeha avo lenta
Vita ny tetik'asa fanamboarana fanamboarana haingam-pandeha ambony sy vita fanamboarana: Rehefa naorina ny Repoblika, dia nalaina tamina emperora Ottoman ny 4000 km.demiryolu. Tamin'ny taona 20 voalohany tamin'ny Repoblika, tsy nisy ny teknolojia fananganana ankehitriny, izany hoe rehefa tsy misy fitaovana fananganana. [More ...]
Governemanta Fuat Gürel, Solombavambahoaka Karabük Cumhur Ünal sy Niyazi Güneş, fanitarana ny lalana ary asan'ny sampandraharaha notontosain'ny ekipa tarika manokana momba ny fitantanana ny lalana sy ny fitaterana ao amin'ny Centre Ski Keltepe [More ...]
Fiaran-dalamby haingam-pandeha avo lenta eto amin izao tontolo izao: misy ny lalamby fiaran-dalamby haingam-pandeha, fampahalalana sy sarintany momba ireo firenena izay mampiasa ny fitaterana haingam-pandeha avo lenta. Amin'ity vaovao ity dia azonao atao ny manakatra ny fampahalalana amin'ny fizarana andalana manaraka. Azafady azafady, [More ...]
Fanohanana takiana amin'ny fandalovan'ny lamasinina haingam-pandeha avy any Düzce
Crimean Tatar Organizations Platform, fivoriana fifampidinihana natao tao Ankara. Nandritra ny fivoriana natolotry ny mpitantana ny Association of Crimean Turks of Duzce, Osman Kesen, izay filohan'ny Association of Crimean Turks of Duzce, dia nilaza fa [More ...]
Ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Cahit Turhan, ny filoha Recep Tayyip Erdogan 30 oktobra 2017'de nosokafana ny lalamby Baku-Tbilisi-Kars (BTK) dia nitondra entana tao anaty roa taona, 275 arivo taonina, hoy izy. Line, [More ...]
Efa lasa ny taona 20 nanomboka ny Revolisiona, izay nampiantrano mpitsidika efa ho 1000 tao amin'ny 250 tao amin'ny tranom-bakonany tsy miankina izay nanehoana ny 58 volana maromaro tao amin'ny tranoben'i TÜLOMSAŞ ao Eskişehir, novokarin'ireo injeniera sy mpiasa tiorka. Ny mpitsidika ao amin'ny tranom-bakoka "voalohany Torkia fiara an-trano" S [More ...]
Governemanta Cuneyt Epcim, mikasika ny fandaharam-potoana momba ny fifanakalozan-dàlana momba ny lalamby mifandraika amin'ny lalana nivezivezy tao Bayburt ka Gumushane dia nitatitra fa tsy hita taratra ny marina. Hoy ny governora Epcim: «Tsy tara isika amin'ny fiaran-dalamby. Ny teny gasy ny malemy [More ...]
Nihanitatra ny sidina Metro tao Istanbul Noho ny andron'ny Repoblika
28-29 Tamin'ny Oktobra, nisy rafi-pitaterana vitsivitsy natolotra mba hahafahan'ny olom-pirenena any Istanbul handray anjara amin'ny hetsika fanaon'ny Repoblika nokarakarain'ny IMM. Ny Metro dia niasa tamin'ny Metro İstanbul AŞ, iray amin'ny departemantan'i Istanbul Metropolitan [More ...]
Internet maimaimpoana ao Istanbul amin'ny andron'ny Repoblika
Internet maimaimpoana ao Istanbul amin'ny andron'ny Repoblika. Ny masoivoho Metropolitan Istanbul (IMM), Andro République 29 Oktobra tany Istanbul manerana ny Istanbul IMBWIFI hevitra dia nanambara fa tsy hisy fetra ny Internet mandritra ny andro. Nanoratra ny fanambaran'ny yacht ny IMM, "IMM, [More ...]
Sukabary Ahmedabad Bullet lamasinina Tetikasa: Mumbai Ahmedabad Bullet Train Project no tetikasa fiaran-dalamby haingam-pandeha avo indrindra any India izay misy ny 508.17 km lava 12 Station. Anaran'ny tetikasa: fiaran-dalamby any Mumbai-Ahmedabad [More ...]